के तपाईं रक्सी पिउन सक्नुहुन्छ वा स्तनपान दिंदा औषधी लिन सक्नुहुन्छ? - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण समुदाय, कम्पनी प्रेस मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, समाचार औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा भारी खेल समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार खेलहरु कम्पनी
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> तपाईको आमाको दुधमा वास्तवमा के बनाउँदछ?
तपाईको आमाको दुधमा वास्तवमा के बनाउँदछ?
यो राष्ट्रिय स्तनपान महिना (अगस्त) को समर्थनमा स्तनपानमा एक श्रृंखलाको एक हिस्सा हो। पूर्ण कभरेज खोज्नुहोस् यहाँ ।
नर्सि m आमालाई थाहा छ कि तपाईले आफ्नो शरीरमा राख्नु भएको सबै चीज तपाईको स्तन दुध मार्फत तपाईको बच्चालाई असर गर्ने सम्भाव्यता रहेको छ। तपाईं राम्रो पोषण र हाइड्रेसनको लागि प्रयास गर्नुहुन्छ तपाईंको सानोलाई सम्भव भएमा उत्तम खाना खुवाउन।
तर के तपाईं गैर उपभोग्य चीजहरूको खपत गर्नुहुन्छ? विशेष गरी, पर्चेको औषधि र रक्सी। के तिनीहरू नर्सि mothers आमाहरू लिन सुरक्षित छन्? यी दुधहरू कत्ति धेरै तपाईंको दूधमा प्रवेश गर्छन्? हामीले पत्ता लगाउन केहि विशेषज्ञहरूसँग जाँच्यौं।
स्तनपान गराउँदा औषधिहरू
के यो प्रिस्क्रिप्शन लिन सुरक्षित छ? स्तनपान गर्दा औषधी ? साधारण उत्तर प्राय: हुन्छ। एक अनुसार अमेरिकी पेडियाट्रिक्स एकेडेमी द्वारा क्लिनिकल रिपोर्ट , धेरै जसो औषधी र खोपहरू स्तनपान गराउँदा प्रयोग गर्न सुरक्षित हुन्छ र यसले तपाईंको बच्चालाई हानी गर्दैन।
धेरै स्तरीय औषधीहरू स्वस्थ बच्चाका लागि सुरक्षित हुन्छन् [जब स्तनपान गराउने आमाले लिनुहुन्छ], मेरीलल्याण्डको बोवीमा पंजीकृत नर्स रेचेल मार्टिन भन्छिन्। उनी भन्छिन कि धेरै चिकित्सकहरू, बाल रोग विशेषज्ञ, र फार्मासिष्टहरूसँग औषधी र स्तनपानको बारेमा पर्याप्त जानकारी छैन, त्यसैले स्तनपान गराउने परामर्शदाता वा शिक्षकसँग कुरा गर्नु उत्तम हो जुन यसमा विशेषज्ञ छ।
र, निस्सन्देह, सबै औषधीहरू बराबर बनाइएको छैन।
मेडिसिन किसिमको ड्रग र यसको रासायनिक श्रृंगारमा निर्भर हुन्छ, मेरीलील्याण्डको क्राफ्टनमा एक दर्ता नर्स र स्तनपान गराउने परामर्शदाता केली केन्डल भन्छिन्।
यसको मतलव तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले स्तनपान गराउने आमाहरूलाई सिफारिश गर्नु अघि प्रत्येक व्यक्तिगत औषधीको फाइदा र जोखिमहरूको तौल गर्नु पर्छ। AAP रिपोर्ट अनुसार, विचार गर्न केहि कारकहरू:
आमालाई औषधिको आवश्यकता छ।
दुध उत्पादनमा औषधिको सम्भावित प्रभावहरू।
शिशु को उमेर।
बच्चाले प्रति दिन कति स्तन दुध खुवाउँछ।
औषधि को मात्रा स्तन दुध मा उत्सर्जित।
स्तनपान गराउने शिशु द्वारा मौखिक शोषणको हदसम्म।
स्तनपान शिशुमा कुनै पनि सम्भावित प्रतिकूल प्रभावहरू।
ती अन्तिम बुलेट पोइन्टहरूलाई नजिकबाट हेरौं। तपाईं कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि औषधीको कति मात्रा स्तनको दूधमा निकालिन्छ, र त्यसपछि तपाईंको बच्चाले सोच्छन्? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि औषधीले तपाईंको बच्चालाई नोक्सान पुर्‍याउँछ भने कसरी थाहा पाउने?
मार्टिनले भन्छ, यो औषधी र यसले कसरी चयापचय र उत्सर्जन हुन्छ, र यसको आधा जीवन के हो त्यसमा निर्भर गर्दछ। स्तनपान गराउनको लागि लागूपदार्थको सुरक्षाको बारेमा डा। थोमस हेलले अझ राम्ररी अनुसन्धान गर्नुभयो।
डा। हेलेको पुस्तक, औषधि र आमाको दुध , डा। हिलेरी ई रोवे, फर्म डीडीको सह-लेखक, हाल यसको १ 17 औं संस्करणमा छ। यो स्तनपानको समयमा औषधि सुरक्षाको लागि प्रिमियर स्रोत मानिन्छ।
लेखकहरूले धेरै कारकहरूको प्रयोग गरेर ड्रग्सको एक विस्तृत विविधतामा दुग्धपान जोखिम कोटी (LRC) तोक्छन्। पहिले, तिनीहरू औषधिको समग्र विषाक्तता निर्धारित गर्छन्। केहि औषधिहरुमा कम विषाक्तता हुन्छ, जस्तै पेनिसिलिन, सल्फास, र एनएसएआईडी (जस्तै आईबुप्रोफेन)। तर अरूहरू धेरै विषाक्त छन्, जस्तै क्यान्सर ड्रग्स र एन्टिमेटाबोलिटहरू। अक्सर, औषधिमा आमाको दुध डाटा प्रदान गर्नका लागि कुनै नियन्त्रणहरू उपलब्ध छैनन्। यस अवस्थामा, लेखकहरू औषधिको फार्माकोकिनेटिक्समा निर्भर छन्, जसमा यसको मौखिक शोषण, प्लाज्मा स्तर, र आधा जीवन शामिल छ। यो जानकारी प्रयोग गरेर, लेखकहरू यसको LRC को एक शिक्षित अनुमान बनाउँदछन्।
हामीलाई सम्भव पर्सनल औषधीहरूको लागि एकल ब्लग पोष्टमा यी सबै कारकहरू तोड्न असम्भव हुन्छ। यद्यपि तपाई खास औषधिहरूको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ शिशु जोखिम केन्द्र , डा। हेलेको अर्को परियोजना। केन्द्रले एक हटलाइन प्रदान गर्दछ तपाईं स्तनपान गराउने समयमा औषधि सुरक्षाको बारेमा प्रश्नहरूको साथ कल गर्न सक्नुहुन्छ।
रक्सी र स्तनपान
जब यो आउँछ रक्सी र स्तनपान , उत्तरहरू अलि फरक छन्। आमाहरूले ठिक्क मात्रामा पिउन रमाउन सक्दछन्, केन्डल भन्छिन्। औंठाको एक राम्रो नियम यदि तपाईं ड्राइभ गर्न को लागी पर्याप्त छ भने, तपाईं स्तनपान गर्न ठीक हो।
सहित धेरै विज्ञहरू अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्स र रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रहरू , सिफारिश गर्नुहोस् कि नर्सि mothers आमाहरू प्रति हप्तामा एक देखि दुई मादक पेय पदार्थहरू सेवन गर्दैनन् (र उनीहरू भन्छन् कि पिउनु हुँदैन, सुरक्षित पनि हुन्छ)। नर्सि मदिरा सेवनको दुई वा बढी घण्टा पछि हुने गर्दछ, बच्चामा जोखिम कम गर्न। तर यस विषयमा अनुसन्धान विरोधाभासपूर्ण छ।
मार्टिन भन्छ, रक्सीले स्तनको दूधमा पनि समान दरमा मेटाबोलिज हुन्छ। अर्को शब्दमा, यदि तपाईंको रक्सी मदिराको मात्रा ०.88% छ तीन गिलास रक्सी पिए पछि, जसले तपाईंलाई प्रायः राज्यहरूमा गाडी चलाउनका लागि कानुनी सीमामा पार्छ, भने तपाईंको स्तनको दूध पनि ०.०8% रक्सी हुन्छ।
तुलना उद्देश्यका लागि, ती गिलास वाइनको प्रत्येक सायद १०-२०% रक्सी थियो। त्यसोभए तपाईंको बच्चाले पिइरहेको दूधमा तपाईंको पेयपदार्थहरू भन्दा उल्लेखनीय मात्रामा कम मदिरा छ। वास्तवमा, जर्नल मा एक क्लिनिकल समीक्षा अनुसार आधारभूत क्लिनिकल फार्माकोलजी र विष विज्ञान , आमाको दुध मार्फत नर्सि bab बच्चाहरूले सेवन गरेको मदिराको मात्रा आमाले पिउने रकमको झन्डै –-–% हुन्छ। अध्ययनका अनुसार द्वि घातुमान पिउने सैद्धान्तिक मामिलामा पनि बच्चाहरूलाई चिकित्सकीय सान्दर्भिक मात्रामा रक्सीको अभाव हुँदैन। वयस्कहरूको लगभग आधा दरमा नवजात शिशुहरूले रक्सीलाई मेटाबोलिज गर्छन्।
धेरै वर्षदेखि लोकप्रिय विश्वासको विपरित, त्यहाँ पम्प र डम्प गर्नुपर्दैन। जसरी रक्सी तपाईंको स्तनको दूधमा पस्दछ, यो पनि बित्दछ बाहिर उही रेटमा जुन तपाईंको रगतबाट गर्दछ। तपाईंको रगत रक्सी सामग्री तल झर्दा, तपाईंको दूधको मदिरा सामग्री हुन्छ। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँसँग तपाइँको बच्चालाई नर्स गर्न धेरै पेय पदार्थहरू थिए, एकछिन पर्खनुहोस् (सामान्यतया दुईदेखि तीन घण्टाको लागि पर्याप्त हुनुपर्दछ) जब तपाइँ शान्त हुनुहुन्छ। र त्यो तरल सुन बाहिर डम्प नगर्नुहोस्!
यदि तपाईं स्तनपानको समयमा मदिरा वा प्रिस्क्रिप्शन औषधिहरूको सुरक्षाको बारेमा कुनै प्रश्नहरू हुनुहुन्छ भने, स्तनपान गराउने सल्लाहकार, तपाईंको OB-GYN, वा तपाईंको बच्चाको बाल रोग विशेषज्ञको साथ कुरा गर्नुहोस्
के औषधि meloxicam को लागी प्रयोग गरीन्छ
मैले आफ्नो स्वास्थ्य बीमा गुमाएँ — अब के?
के तपाइँ xyzal र benadryl सँगै लिन सक्नुहुन्छ
कसरी छिटो मूत्र संक्रमण बाट छुटकारा पाउन
के मैले जन्म नियन्त्रण को लागी तिर्नु पर्छ?